YouTube laghachiri na Fire TV na Amazon Prime na Chromecast na gam akporo TV | Gam akporosis
YouTube laghachiri na Fire TV na Amazon Prime na Chromecast na gam akporo TV
Mgbe Amazon bidoro ọrụ vidiyo ya, ụlọ ọrụ Jeff Bezos bidoro ịnwa nkwekọrịta dị iche iche na Apple na Google, nke mere na ọrụ vidiyo ya, Amazon Prime Video, dị na Apple TV na gam akporo TV na Chromecast.
Enweghị ike iru nkwekọrịta kwụsịrị ire ngwaọrụ ndị a. Obere afọ gara aga, ya na Apple nwere nkwekọrịta. Agbanyeghị, na mbido Amazon Fire Fire Stick TV, ụlọ ọrụ abụọ ahụ gosipụtara ọzọ esemokwu ha, Google kpebiri iwepụ ngwa ha na Fire Stick TV.
Ọ dabara na ndị ọrụ niile, ụlọ ọrụ abụọ ahụ ruru nkwekọrịta na Eprel gara aga ma YouTube dị maka ndị ọrụ ugbu a. Amazon Fire TV 4nd Gen XNUMXK na Basic Edition ngwaọrụ tinyere Fire TV Cube. Na mgbakwunye, ọ dịkwa na Toshiba, Westinghouse Fire TV, nsụgharị na Element.
N'ihi nkwekọrịta a, ndị ọrụ nwere Chromecast ga - enwe ike izipu ọdịnaya sitere na Amazon Prime Video na igwe onyonyo ha. Na mgbakwunye, ụdị nwere gam akporo TV nwere ohere ọzọ na Amazon Prime Video, ọrụ na-agbakwunye ọdịnaya na ịdị mma. N'ime ọnwa ndị na-abịanụ, nnukwu ọchụchọ ahụ ga-ebuputa YouTube Kids na YouTube TV ngwa maka osisi Amazon.
Kemgbe ọkwa nke iwepụ ngwa YouTube site na Google na Fire TV, ndị ọrụ niile ahọrọla ịzụrụ ngwaọrụ a iji gbanwee TV ha ka ọ bụrụ ekwentị nwere ike. gaa n'ihu ịnweta ikpo okwu vidio YouTube site na ihe nchọgharị Firefox.
Ọ dabara nke ọma, ọ bụrụ na otu n'ime ojiji kachasị nke Fire TV gị bụ ịnweta YouTube, site ugbu a gaa n'ihu, ị nwere nhọrọ nke ịnweta ya na ngwa nke YouTube, n'ụzọ dị jụụ karịa site na ihe nchọgharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » YouTube laghachiri na Fire TV na Amazon Prime na Chromecast na gam akporo TV
Xiaomi Mi 9 mgbe izu ole na ole jiri, na-eme ka mmetụta dị ike
Nye onye nwere blonde toupee ezigbo bọọlụ ịmalite ya tere aka na WonderPants: Rocky Rumble